Mobile dzenhare nyaya nokuda iPhone 7 nyaya mubato uye 7 plus Wallet pakutsiva For iPhone 7 makadhi nyaya zvinonyatsoenderana makadhi maviri
New Michina imd China electroplated oem tsika ph ...
zvigadzirwa zvitsva oem jira dzenhare nyaya nokuti iPhone Mobile ...
Mobile dzenhare nyaya nokuda iPhone 7 nyaya mubato uye 7 plu ...
IMD electroplated mavara tpu + yori dzenhare mhosva nokuda Iph ...
nyanzvi anopenya rinopenya runharembozha nyaya nokuti ini ...
Supply Mano: 10000 Piece pazuva
oem iml kaviri dzinovaraidza firimu dzenhare nyaya
IML Product Description uye Feature:
Material: PET firimu + TPU, PC, PC + ABS
IML anogona kuona marudzi zvigadzirwa zvakawanda Color inogona kuchinjwa, zvakawanda nyore mune imwe hurongwa.
zvinhu zvose zviri zvainoreva kubva Bayer Germany.
IML Michina ane kwazvo zvazvinoita nemishonga.
Pattern mukati foni nyaya anogona kuchengeta nguva refu hauzombosvavi.
More Michina kusarudza kuti runhare nyaya. Nokuti rejira, dehwe, mashenjere emapuranga, nokupenya simba, etc.
OEM uye ODM inowanika nesu.
1.10years IML Michina mugadziri. Tine kwazvo R & D dhipatimendi. Tinogona kuita Foroma maererano nezvaidiwa wako.
2.More yemakwikwi fekitari mutengo kuitira mutengi wacho purofiti.
3.Professional PD & in qa dhipatimendi anogona nechokwadi pfupi pakukurukura nguva uye kunyatsoomerera kudzora unhu kuti zvigadzirwa.
4.Complete dhipatimendi kubva Kuita Foroma kuti chiputiriso. Vose Danho vachava yakazvimirira kupera nokuda fekitari yedu.
1.High unhu: pic wose uchava zvakaitika kuzviomesera kaviri onorora.
2.Best Delivery nguva: richava kudzora kubudikidza mugadziri yedu zvachose
3.Competitive mutengo: mutengo All vachava pamutemo, kutongwa ouinjiniya dhipatimendi.
4.OEM design: 10years ruzivo OEM & ODM mugadziri
HXS Ltd, IML / IMD Michina gadzira mutungamiri!
Shenzhen HXS michina Ltd, yakavambwa muna 2009, ndiye nyanzvi mugadziri pfungwa IML rwokugadzira zvinhu. zvigadzirwa edu anofukidza nzvimbo huru kusanganisira IML dzorunhare nyaya, IML dzorunhare Panel, IML digitaalinen zvigadzirwa panel, IML musha midziyo yemagetsi panel, zvokurapa midziyo Panel, etc.
The kambani rinofukidza 3000 mativi metres nharaunda, riri mu Henggang Town, Longgang District of Shenzhen City, China. Near by Liuyue pevhu. Yakakunakira zvifambiso zvakanaka vatengi kuzoshanyira fekitari yedu. fekitari yedu anogona kupedza zvose zviripo muitiro pamwe zvinhu zvedu pasina. Kurimwa Nyorawo Kuumbwa dhipatimendi, kudhinda dhipatimendi, achiumba dhipatimendi, jekiseni dhipatimendi, rokuongorora department.our vashandi vanoda kusvika 300 vanhu. anewo gurusa utariri uye michina matarenda.
Zvino tava makambani akawanda akakurumbira kwenguva refu pamwe naye, vakadai LG, OPPO, BYD, Incase, TTPOD, LAWA, Kate Spade, etc.
"Ipai hwakanakisisa uye zvigadzirwa rokusika vatengi redu" vanonyanyonangwa yedu uye vachiri kusimbirira kuita zvose time.Welcome kushanyira fekitari redu uye kuita mushandirapamwe refu uye takunda zvisamumirira ramangwana.
IML (In-Mould Label) ndiro itsva foni nyaya michina kuti kudhinda muenzaniso pamusoro PET firimu kuti jekiseni.
IML ndiye ndiwedzere pakadhindwa IMD (In-Mould Decoration)
Isu tiri nyanzvi IML mugadziri pfungwa IML michina kwemakore 10 ruzivo. Kubva Kuumba kuna Printing, Achigadzira, jekiseni, Inspection, kurongedza. Vose matanho uchava wakazara nokuda mugadziri yedu.
Muri anogadzirwa kuti?
Tiri huru pave IML akatevedzana zvigadzirwa. Kusanganisira IML dzerunhare nyaya, IML dzorunhare Panel, IML digitaalinen panel, IML akangwara yokurinda panel.IML simba kubhengi Panel, IML Washing machine Panel, IML yemagetsi huzere panel, etc.
Unogona kupa OEM basa?
Isu tiri nyanzvi OEM mugadziri kwemakore gumi ari IML Michina indasitiri.
Tapota tumira kwenyu zvinodiwa magadzirirwo mufanidzo faira nesu kuti Foroma kwamuri.
Nokuti edu iyezvino ivhu vachava akasununguka kwedu nemhosva uye zvinodiwa kudhinda ivhu vanofanira kubhadhara.
Zvakadini yako Delivery nguva?
2-3days nokuti mienzaniso uye 3-5days kuti hurongwa. The chihombe chinotakura zvinhu achava maererano yenyu uwandu.
Previous: IMD electroplated mavara tpu + yori dzenhare mhosva nokuda iPhone dzakatevedzana
Next: itsva yokusvika private muforoma oem nedehwe dzenhare nyaya pamusoro iPhone dzakatevedzana
runharembozha nyaya nenhumbi mavara mukuru-magumo ...